Faka i-Edit-In-Place kunoma yiluphi uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe | Martech Zone
NgeSonto, Novemba 25, 2012 NgoMsombuluko, Novemba 26, 2012 Douglas Karr
Ngo-2006 ngangiphusha ukuthi onjiniyela bamukele hlela-endaweni ubuchwepheshe… futhi abenzanga. Eminyakeni eyisithupha kamuva futhi ngisanwaya ikhanda lami ukuthi akekho umuntu osungule uhlelo olukhulu lokuphathwa kokuqukethwe olusebenzisa hlela-endaweni ubuchwepheshe.
Kubonakala lokho Ikhophi kuxazululwa hlela-endaweni conundrum yawo wonke umuntu ngokwakha insizakalo edidiyelwe emhlabeni wonke. I-Copybar isebenzisa ama-API ahlinzekwa yizinhlelo eziningi zokuphathwa kokuqukethwe futhi ikunikeze izindlela ezilula zokuhlela isayithi lakho lisendaweni, noma ngabe usebenzisa i-Shopify noma i-WordPress. Banikela nangezabo API ukuze abanye abahlinzeki bohlelo lokuphathwa kokuqukethwe bakwazi ukuhlanganisa i-toolset yabo kalula.
Ukufaka nokuhlela i-Copybar
Kopisha i-Copybar Snippet yakho - Yonke imibhalo yamaphepha we-Copybar ifaka igama le-akhawunti yakho negama lesici elihlukile. Thayiphe ngesandla, ukusebenzisa kwethu okumangazayo I-Copybar Snippet Generator.
Namathisela lapho ufuna khona - Ungabeka izakhi ze-Copybar cishe noma kuphi lapho ungafaka khona i-HTML. Ifayela le-HTML kuwebhu yakho yewebhu. Kumhleli wakho we-WordPress kufayela le- buka. Kuzilungiselelo zetimu zeTumblr noma i-Shopify. Uzoba nobuciko kangakanani ngezinto zakho ze-Copybar?
Chofoza u-'Engeza ikhophi ' - Layisha ikhasi lakho (lidinga ukuba bukhoma neseva). Chofoza inkinobho entsha ethi 'Faka ikhophi', wenze into yakho, bese uqhafaza ku-'Save '. Isici sakho se-Copybar sibukeka njengengxenye yekhasi lakho lendabuko, kepha ungaqhubeka nokuyihlela bukhoma. Futhi ungangeza abahlanganyeli ukuze nabo bakwazi ukuyihlela.
I-Copybar akuyona nje ibha yamathuluzi yangempela, kukhona yonke i-interface yokuphatha etholakala ekusithekeni kwakho. I-Copybar inamathuluzi okuphatha zonke izinto zakho ze-copybar kusuka kuhlelo lokusebenza lwewebhu olunembile. Ungalandelela ngayinye yezinto zakho ze-Copybar, lapho zivela khona, nokuthi ubani omunye osebenzisana nazo.
Amanani ayamangalisa, ama- $ 4.95 nje ngenyanga wezinto ezingenamkhawulo, abahlanganyeli abangenamkhawulo kanye nekhono lokuguqula noma ukuvala ibheji le-Copybar.
Nov 29, 2012 ngo-11: 56 PM
Ngiyabonga kakhulu ngokwabelana ngalokhu. Kuwusizo olukhulu. Umsebenzi omuhle!